Maitso (ny) ahitra | NewsMada
Maitso (ny) ahitra
Tonga ihany ! Tsy ny taona vaovao no tian-kambara eto fa ny orana. Herinandro lasa izay, efa nitaintaina, toy ny sahobakaka am-body riana, ny tantsaha amin’ny manodidina an’Antananarivo, eny, amin’ny ankamaroan’ny faritra mpamokatra mihitsy aza, noho ny tsy fisian’ny rano. « Ahiana ny mosary, raha izao no mitohy… Fa tsy mbola nisy toy ity », hoy ny sasany, kivy ny amin’ny mety haharatsy ny vokatra.
Fa tonga ihany anefa izy ity. Raha sahirana amin’ny fiakaran’ny rano eran’ny arabe ny tan-dRenivohitra, mibitaka sy velom-bolo kosa ny eny ambanivohitra. Faritra maro no mbola tsy niroso tamin’ny fanetsana noho ny tsy fisian’ny rano, hany ka, tato anatin’ny roa andro izay, samy nirohotra namita ny azy, nanararaotra ny ranon’orana, ny tsirairay.
Hita ho mihamahazo aina ny zavamaniry, efa lanaka sy nalazon’ny hafanana. Hahafinaritra ny tontolo, satria maitso ny ahitra. Saingy, etsy ankilan’izay, manomboka eto, miditra amin’ny maitso ahitra tokoa ny ankamaroan’ny tokantrano, na ny any ambanivohitra na ny aty an-tanàn-dehibe.
Maitso ahitra, midika hoe tsy mbola miakatra ny vokatra, hany ka tsy misy ny hohanina, ankoatra ireo vitsivitsy manana tahiry ampy mandavan-taona. Tantsaha maro no mbola miaina izany na efa tsy tambo isaina aza ireo tetikasa nampiharina tatsy sy taroa, nenti-nampitombo ny vokatra. Tsy tratra akory ny tanjona ?
Fa mbola ho ela koa vao hiakatra ny vokatra ho an’ny ety an-tanàn-dehibe. Ho sarotra diavina ireo herinandro efatra mandrafitra ity janoary ity ary ho mafimafy kokoa ny fiandrasana ny fiotazana ny vokatra, amin’ny faran’ny volana. Tsy vitsy ireo tsy nametra ny fandaniana tamin’ireny fety ireny ? Na ho eny na ho tsia ny valin’izany, ny vola miditra mihitsy anie no tsy ampy e ! Ny vidim-piainana anefa, tsy mitsaha-mitombo. Ary toy izany hatrany, isan-taona.